Aan kala soo bixi kartaa ama rakibi ClipWrap for Windows?
> Resource > Windows > Waxaan ku rakibi karaa ClipWrap Wixii Windows?
ClipWrap waxaa loo arkaa inay mid ka mid ah 'buundada' caan ah oo koombiyuutarka, daawashada ama xitaa sixiddiisa aad AVCHD iyo HDV video files kombiyuuterada Mac. Sababta waxaa la odhan jiray buundo waxaa sabab u ah awooda ClipWrap iyo habka sahlan ee rewrapping kuwa video files si waa playable la codsiyada Mac ee. Sidaa awgeed, waxaa diinta QuickTime MOV files.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa ay u muuqataa in ay dhibaato ku noqdeen isku dayayaan in ay soo baxdo iyo rakibi ClipWrap for Windows. Dhab ahaantii, ma jirin! Dhibaatada kaliya laftiisa waa in ClipWrap waxaa loogu talagalay oo loo dhowray waayo Mac kaliya. Haddii aad raadinayso kale ClipWrap for Windows ah, isku day inaad la isticmaalayo Wondershare Video Converter Ultimate .
Marka laga reebo si loogu badalo aad AVCHD iyo HDV video files si QuickTime MOV files awood, waxaa sidoo kale ku jira qaabab kale oo la heli karo wax soo saarka. Sidaas, waxaan idinku leeyahay doonaa in ay bedel fiican oo ClipWrap for Windows. Inkastoo magaca laftiisa waa wax iska cad in ay tahay Converter video ah, laakiin software dhab ahaan ka badan samayn kara. Akhri 3 doorasho fudud hoose si ay sawir fiican waxa ay bixiyaan kale oo gaar ah ClipWrap,
1 Upload oo aanay ku yaalla
La mid ah si ay u ClipWrap, waxaad sidoo kale gali kartaa oo aad loogu badalo video files ku yaalla la Wondershare Video Converter Ultimate ah. Mid ka mid ah farqiga ugu weyn ee in aad soo aragto in uu yahay xawaaraha diinta sida Video Converter Ultimate ka badalo kartaa ilaa 30X dhaqso leh ay keentay APEXTRANS TM technology.
Ka dib markii in, wax yar ka dhirtuba nooca taageeray Qaab Output (ka menu hoos-hoos) dooro xulasho hor inta uusan goolka ugu badalo button.
2 ayeey ugu laguugu sahlo (ka hor inta diinta)
Waxa ku habbon tafatirka dhisay-in, waxaad si fudud u jar karo iyo noola aad video files oo aan haysan si ay u soo bixi ama gashato kale. Waxa kale oo aad Falanqeynta dari karaa saamayn, watermarks iyo subtitles-waqtiga dhabta ah. Tani waa mid aad u anfacaya oo muhiim ah haddii aad rabto in lagu daro in la taabto shakhsi gal videos ka hor qoyska ama saaxiibbada la wadaago.
Fiiro gaar ah : Waxaad ma xaalkaa kartaa video files leh ClipWrap.
3 wadaag videos (ka dib diinta)
Haddii aad jeclaan lahayd inaad la qaybso qoyska ama saaxiibbada aad video files, aad sameyn karto waa labada online iyo offline. Dooro fursad u Guba ka toolbar ku saabsan sare ee shaashadda. Waxaad gubi kara video files galay DVD ama badbaadin sida file ISO ah.
Haddii kale, kaliya waxa loogu badalo in ay qaab YouTube ama Facebook ku socon for uploading gal ah baraha warbaahinta bulshada.
Ha ii ogaano waxa aad iyo qiimeyn kale ClipWrap this u Windows!
Habka ugu sahlan oo dhakhso ah si ay u tirtirto Windows Update Files
Top 10 Beddelka xarunta warbaahinta daaqadaha on Windows 10
Waa go'aan caqli leh si aad u cusboonaysiiso daaqadaha 10 hadda (ka dib markii uu 29-kii July)
MPEG Streamclip Alternative for Windows: wax ku ool ah, lagu kalsoonaan karo, Aamin
Windows 7 SSD ayna: Sida loo Tayadoodii Windows 7 SSD